RUDAW TV oo Warbixin ku Falan-qeeyay Dawladnimadda, Dimuqraadiyadda iyo Cilaaqaadka Somaliland la Leedahay Caalamka
Xisbiga KULMIYE oo Jawaab adag ka Bixiyey Hadallo Deel-qaaf ah oo ka soo yeedhay Guddoomiyaha WADDANI
Soomaaliya oo Beenisay in ay Imaaraadka kala Saxeexdeen Heshiiska Dekeda Berbera
“Anigaa Goob-Joog ka ahaa Heshiiska Waxaana Kala Saxeexday Somaliland iyo Imaaraadka” Faysal Cali Waraabe
Xukuumadda Somaliland oo Imaaraadka ka Dalbatay Inay Saxdo Warkii Wasiirkooda
Qaddiyada Somaliland oo Lagaga Hadlayo Baarlamaanka Midowga Yurub
Wasiir Seed Sadex Guddi u Magacaabay Dar Dar Geliya Wax-soosaarka Beeraha
HASS Petroleum oo Xukuumadda ugu Baaqday in Talaabo laga Qaado Shirkadda Dalka Keentay Shidaalka Xun
Madaxweynaha oo Kormeeray Xarunta Wasaaradda Warfaafinta Khudbad Muhiim ahna ka Jeediyey
Somaliland oo Sweden ku wargalisay sababta ay u hakisay wada hadalkii ay Soomaaliya la waday
Baarlamaanka Somaliland iyo Sweden oo ka Wada Hadlay Qabsoomidda Doorashoyinka
Hargeysa(Dawan)-Telefishanka Qowmiyadda Kurdiyiinta oo la yidhaahdo RUDAW TV, ayaa warbixin dheer oo ka sameeyay Somaliland. Waxaanay ka warrameen nabadgelyada Somaliland ku naaloonayso, cilaaqaadka ay caalamka la leeyihiin iyo fursadaha ay u haysato xiligan inay caalamka ka hesho aqoonsiga ay raadinaysay muddo rubuq qarni ku siman.
Warbixintan oo uu diyaariyay weriye magaciisu yahay Ayub Nuri, oo dhawaan booqasho ku yimmid Somaliland, waxa kaloo uu si qotodheer uga sheekeeyay xasuuqii loo geystay shacbiga Somaliland ee ay fulisay Taliskii Soomaaliya. Waxa kale oo warbixintu ka sheekaysay ballaadhinta dekedda Berbera iyo saldhigga Millatari ee Imaaraaraadka carabtu ka samaysanayo Berbera.
Haddaba waxa warbixintan soo turjumay Weriye Siciid Faarax Muuse oo ka tirsan Wargeyska Dawan, waxaanay intii ugu muhiimsanayd u qornayd sidan:-
“Somaliland waxay madax-bannaanideeda ay kaga noqotay Soomaaliya ay caddaysay 18-kii May 1991-kii. Waxay Soomaaliya ka mid ahayd 31 sannadood oo toddobanaan sannadoodna lagu sameeyay shacbigeeda xasuuq ay gacanteeda ugu gaysatay dawladdii dhexe ee Soomaaliya, sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland, Dr. Sacad Cali Shire.
Waxay garowsadeen inay haddimo ka dhaxleen midnimadii ay la galeen Soomaaliya, waxaanay halgan kula soo noqdeen madax-bannaanidoodii.
Jamhuuriyadda Somaliland, aqoonsi rasmi ah kama ay helin qarramada midoobay iyo dal adduunyada ka mid ah midna. Hase ahaatee waxay cilaaqaad wanaagsan la leeyihiin dalalka ay jaarka yihiin oo ay ka mid yihiin Itoobiya, Jabuuti iyo dalka Imaaraadka carabta.
Si ka duwan Soomaaliya, Somaliland waxa ka jira xasilooni, nabadgelyo iyo dawladnimo shaqeynaysa. Dalkani waxa uu leeyahay Baarlamaan iyo madaxweyne la doortay.
Dhaqaalaha dalkan muslimka ahi, waxa uu ku tiirsan yahay xoolaha nool, balse waxa xooluhu u nugleeyay abaarta. Sannadkii hore waxa ka le’day malaayiin xoolo ah oo ku baxay abaarta darteed, waxaa dadkii dhaqanayay ay ka soo hayaameen miyiga iyagoo soo galay magaalooyinka waaweyn.
Qaar ka mid ah Hay’adaha shisheeye ayaa caawiya Somaliland, haseyeeshee dawladda Somaliland waxay doonaysaa in caawimadani ay noqoto aqoonsi caalami ah oo ay ka hesho beesha caalamka. waxay aaminsan tahay in aqoonsigu uu u suurtogelinayo inay gasho heshiisyo ganacsi, ammaaho iyo inay macaamil siyaasiya oo heer caalami ah kula macaamisho adduunka.
Indhaha oo dhammi waxay eegayaan magaalada Berbera, dalka Imaaraadka carabta ayaa malaayiin doolar ku kharash gareynaya dekedda Berbera. Waxa kaloo ay dhisanayaan waddo 250km ah oo isku xidhaysa Berbera iyo xadka Somaliland la wadaagto Itoobiya.jidkan waxa halkii kiilomitirba ku baxaysa hal milyan oo doolar. Waxa kaloo baarlamaanka Somaliland ogolaadeen in dawladda Imaaraadka carabtu ay saldhig millatari ka samaysato Berbera.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland, Dr. Sacad Cali Shire, ayaa noo xaqiijiyay in aanu saldhiggani waxyeelaynin dhexdhexaadnimadii iyo nabadgelyadii Somaliland haysatay, waxaannu yidhi; “Maya, waxyeelo kama dhalanayso saldhiggann, 25 sannadood ee ugu dambeeyay Somaliland wax dhibaato ah ulama tegin Soomaaliya iyo meel kale toona, himiladayadu waa inaanu nabadgelyo kula noolaanno dalalka Mandaqada.ciddna waxyeelo kuma aha saldhiggani xataa Soomaaliya.”
Dadka reer Somaliland waxay rajaynayaan iskaashigan u bilaabmay Somaliland iyo dalka isu-tagga Imaaraadka carabta (UAE) inuu yahay bilowga aqoonsi rasmi ah oo ay Somaliland ka heli doonto dunidda carabta.
99% dadka reer Somaliland waa muslim. Somaliland waxay fahamsan tahay in xasilooni darrada ka jirta mandaqada iyo dagaalka budhcad baddeedu uu fursad u siinayso Somaliland in qiimaha ay caalamka ugu fadhidaa noqdo mid sare u kaca. Dalal badan ayaa Somaliland ugu balan qaaday haddii uu hal dal aqoonsado inay noqon doonaan kuwa ku xiga ee ictiraafaya. Dawladda iyo dadka reer Somaliland waxay qalbi samaan ku sugayaan maalinta la aqoonsan doono.”
Waxa warbixinta Telefishankankaasi si qotodheer uga warantay xasuuqii baahsanaa ee Taliskii Siyaad Barre u geystay shacabka Somaliland. waxaanu xusay in magaalada Hargeysa dhinac walba laga helayo xabaal wadareedyo muujinaya xasuuqii loo geystay shacabka Somaliland.